हाम्रा मान्छे कहाँ गए ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
हाम्रा मान्छे कहाँ गए ?
२०७० चैत्र १९, बुधबार ०३:१३ गते
भरतपुर । छोरी अन्माएको पाँच दिनमा घर छाडेर हिँडेका कमल गिरी २० दिन हुँदा पनि घर फर्किएका छैनन् ।
भरतपुर–२ का ४१ वर्षीय कमल कहाँ गएका हुन् परिवारका कसैलाई पनि पत्तो छैन । ‘सवैतिर खोजियो तर भेटिएको छैन’, गहभरि आँशु बनाउँदै कमलकी श्रीमती लक्ष्मी गिरीले भनिन्, ‘खोज्नुपर्ने आफन्तका घरमा, चितवन, नवलपरासी र तनहूँका विभिन्न ठाउँमा खोजी गरियो कहाँ छन् पत्तो छैन ।’
कमल फागुन ३० गते राति घरबाटै हराएका हुन् । श्रीमती लक्ष्मीका अनुसार राति तीन बजे पिसाव गर्न भनेर घरबाट निस्किएका कमल घरभित्रै पसेनन् । फागुन २५ गतेमात्रै कमलकी कान्छी छोरी कन्चनको विवाह भएको थियो । कमलले आफू हराउनु अघिल्लो दिन फागुन २९ गतेमात्रै दुलहन फर्काउन आएकी छोरीलाई विदाइ गरेका थिए ।
कमलका एक छोरा, दुई छोरी र वृद्ध आमा पनि छन् । ‘सिङ्गो परिवारको जिम्मा लिनुपर्ने मानिस हराउँदा निकै पीडा भएको छ’, लक्ष्मीले भनिन्, ‘परीक्षा दिइरहेको छोरा पनि दिनरात नभनी अहिले बाबुको खोजीमा जुटेको छ । छरछिमेक सवैले आफ्नो बलबुताले भेटेसम्म खोजी गर्न सघाइ रहेका छन्, तर पत्तो लाग्न सकेन ।’
‘कतैबाट बोरामात्रै टिपेर आए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । जहाँ जुन अवस्थामा भएपनि कसैले खबर गरे आफैँ गएर ल्याउने थिएँ’, लक्ष्मीले भनिन् ।
पछिल्लो समय कमल जसरी नै घरबाट हराउनेको संख्या बढी नै हुन थालेको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कमा पनि चितवनमा गत साउनयता मात्रै १७३ महिला बालबालिका र ५० पुरूष गरी २४२ जना मानिस हराएका छन् । हराएका मानिसका आफन्त चिन्ता गर्छन्, ‘हाम्रा मान्छे कहाँ गएका होलान् ?’
हराएका मानिस खोजी गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी पनि हराएको मानिस कहाँ जान्छ यसै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
‘घरबाट हराएको भने पनि उमेर पुगेका युवा युवती विवाह गरेर हिँडेका हुन्छन्’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका मुद्दा फाँटका प्रहरी सहायक निरीक्षक पूर्णबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘हराएका कति मानिसको हराएलगत्तै शव पनि भेटिएका उदाहरणहरु पनि प्रशस्त छन् ।’
साउनयता मात्रै घरबाट हराएका चार जनाको केही दिनपछि शव भेटिएको छ । भरतपुर–२ आँपटारीकै ५० वर्षीया अर्जुन भनिने क्षेत्रनाथ सुवेदीको हराएको ६ दिनका दिन चैत १२ गते नारायणी नदी किनारमा शव भेटियो । माघ ३ गते घरबाट हराएका भरतपुर–६ का खगेन्द्रदास सापकोटाको पनि नारायणी नदीमै शव भेटियो । रत्ननगरका हरिप्रसाद नेपाल पनि चैत ६ गते हरायो भनिए तर पछि शव भेटियो ।
कतिपय युवतीहरु घरबाट हराएको उजुरी परेपनि उनीहरु बेचबिखनमा समेत पर्ने गरेको पाइएको छ । प्युठान घर भई दाङमा बसोबास गर्ने एक किशोरी चितवन घुम्न आएका बेला बेचबिखनमा परिन् । यस्तै भरतपुरकै एक किशोरी पनि बेचिएको प्रमाण फेला परेको छ । यी दुवै किशोरी बिक्री गर्नेलाई चितवन प्रहरीले अहिले पक्रेर कारबाही गरिरहेको छ ।
जान्नेहरु भन्छन्, ‘कतिपय मानिसहरु परिवारमा हुने झगडा तथा तनावका कारण पनि घर छाडिरहेका छन् ।’
‘पारिवारिक तनावमा परेकाहरु बढी घरभन्दा टाडा कसैले पत्तो नपाओस् भनेर लुकेर बसेका पनि भेटिन्छन्’, एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘कतिपय विरक्तिएकाहरुले ज्यान पनि फालेका छन् ।’
चितवनमा हराएकामध्ये धेरै कममात्रै भेटिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने पनि विगत नौ महिनामा हराएका २४२ जनामध्ये ८९ जनामात्रै भेटिएका छन् । चितवनमा आर्थिक वर्ष ०६९ । ७० मा ३१३ र ०६८।६९ मा २११ जना महिला तथा बालबालिका हराएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।